ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု(24 များအတွက်စုစုပေါင်း ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု ထုတ်ကုန်များ)
ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
tag ကို: XLP-A / B ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေး , CLK ပျံ့အမျိုးအစားဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေး , XD-II ကိုဘက်စုံပိုက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေး
tag ကို: ပျံ့ဆိုင်ကလုန်းခြား , CLK ပျံ့ဆိုင်ကလုန်း , CLK ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး
CLK ပျံ့နှံ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏အသေးစိတ်အကြောင်းအရာ: အဆိုပါ CLK ပျံ့နှံ့ဆိုင်ကလုန်းခြောက်သွေ့တဲ့မဟုတ်တဲ့ fibrous granular ဖုန်မှုန့်များ၏ထောင်ချောက်ဘို့သင့်လျော်သည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ်စည်, အရှင်ကွဲကွာခဲ့ပြီးသောမြေမှုန့်ကိုတက်လှိမ့်ဖို့နှစ်ခု Airflow...
tag ကို: မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , XD-II ကိုဘက်စုံ Tube ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , XD-II ကိုဘက်စုံ Tube ဖုန်ကောက်ခံရေး
XD-II ကိုပေါင်းစုံပြွန်ဆိုင်ကလုန်းအသေးစိတ်အကြောင်းအရာ: အဆိုပါ XD အတွက်ဘွေ - II ကိုပေါင်းစုံဆိုင်ကလုန်းဆိုင်ကလုန်းသွန်းသံသို့မဟုတ်ကြွေထည်နှင့်ဖန်ဆင်းလျက်, အထူ 6mm ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်, ဒါကြောင့်အကောင်း wear ခုခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ flue ဓာတ်ငွေ့ dedusting...
ဆိုင်ကလုန်း separator / ဆိုင်ကလုန်း separator အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု from China, Need to find cheap ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our ဆိုင် Vac ဖုန်စုစည်းမှု, We'll reply you in fastest.